musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Yakachengeteka Etiopian Airlines Kushanda pamucheto?
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Ethiopia Kupwanya Nhau • Hurumende Nhau • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • USA Kuputsa Nhau
Tewolde Gebremariam, Chief Executive Officer weEthiopia Airlines
Mamiriro ehondo yevagari vemuEthiopia ari kuramba achiwedzera kuoma zuva nezuva. Ethiopian Airlines chiratidzo chinodada chevaAfrica. Kutyisidzirwa kunoitwa pamusoro peyero yekuchengetedza yeET inotyisa kune vakawanda mukondinendi uye munyika yendege. Kutyisidzira zvakare kune hupfumi hwakawanda hweAfrica.
MaAfrica haazombokanganwi kukanganisa kweBoeing 737 Max mukati Ithiyopiya uye nhepfenyuro yokuMadokero yakamhanyira sei kupomera vatyairi vendege veEtiopia! Nhasi Boeing inosimbiswa kuva ane mhosva, uye inzwi munhau rachinja.
Nhasi United States iri kunyevera vatyairi vendege nezveAddis Ababa International Airport kuti vasachengetedzeke nekuda kweTPLF TerroristGroup firepower! Hapana boka rakashongedzerwa rinogona kupinda muAddis Ababa! Hapana boka rine zvombo rinokwanisa kuita kudaro.
Aya nemamwe mameseji akawanda ari kufashama social media channels. Chokwadi chinoramba chiri United States iyambiro yevatyairi vendege kuti ndege dzinoshanda pane imwe yenhandare dzendege dzinobatikana zvikuru muAfrica dzinogona “kuratidzwa zvakananga kana zvisina kunanga kumoto wezvombo zvepasi uye/kana zvinokandwa zviri pamusoro-pamhepo” se Hondo yeEthiopia pedyo neguta guru, Addis Ababa.
Vanhu vekuEthiopia vari parumananzombe nekuda kweyambiro yeAmerica uye yambiro yeAmerica yekuti vanhu vemuAmerica vabude munyika.
Mharidzo iyi: Usashandise Ethiopian Airlines. MaTweets anoti chinangwa ndechekuti America ivhiringe hupfumi hweEthiopia. Iyi ihondo isina kutaurwa neUSA!!!
The Federal Aviation Administration advisory yakabudiswa neChitatu inotaura nezve "kurwisana kunoramba kuripo" pakati pemauto eEthiopiya nevarwi vanobva kuchamhembe kweTigray, avo vakauraya zviuru zvevanhu mugore rehondo. US svondo rino yakakurudzira vagari vayo muEthiopiya kuti "ibvai izvozvi," ichiti hapafanirwe kutarisira kubuda kweAfghanistan.
Kuedza kwevamiriri vezvematongerwo enyika kumisa kurwa kwaramba, asi mutungamiri weKenya akaudza gurukota rinoona nezvekunze kweAmerica, VaAntony Blinken, neChitatu kuti mutungamiri weEthiopia mumusangano wakaitwa nemusi weSvondo vakapa pfungwa yekuti vakagadzirira kufunga nezvezvirongwa zvakawanda zvekuderedza kusawirirana uye kuderedza mhirizhonga. mukuru weDhipatimendi reHurumende akadaro.
Zvichakadaro ma tweets kubva kuEthiopiya ari kuda kuti US imire kutyisa vanhu, ichiti Addis Ababa yakachengeteka.
Mamwe ma tweets arikukurudzira kuti African Union iri muAddis Ababa irongedze zvinhu uye iende kune imwe nyika yemuAfrica.
Sachigaro weAfrican Tourism Board VaCuthbert Ncube akati: "Ndakabhururuka nendege neEthiopian ndichipfuura nemuAddis Ababa kakawanda mumazuva mashoma apfuura ndokusangana nevakuru vendege." Hapana njodzi iripo, uye hutungamiriri hweEthiopian Airlines hunofanirwa kuvimbwa nesarudzo yavo yekushandisa ndege yakachengeteka. "
"Ndinovimba kuti kumwe kuwedzera kwekunetsana kwevanhu kunogona kudzivirirwa"
Freddy L kober anoti:
November 21, 2021 pa 13: 34
Zviuru zvevanhu zvakatourayiwa. Tplf inenge iri kuAddis Ababa iyo inenge makiromita zana kubva ipapo. Mauto eOromo Libartion agere kunze kwecapitol akangomirira Tplf kuti vauye mucapitol nemakona akasiyana. Zvakare vari kusunga vanhu veTigrayan mucapitol asi vanoti yakachengeteka.
PM ari kugara lala land chikepe chake chiri kunyura uye ari kuzodzikisa vanhu vakanaka naye.
Jenny Brown anoti:
November 21, 2021 pa 05: 16
Saka nei pasi pano munhu angafunga kuti kubhururuka munzvimbo ine hondo hakuna ngozi? Tinogona kuona.
November 21, 2021 pa 05: 15
Saka nei pasi pano munhu angafunga kuti kubhururuka munzvimbo ine hondo hakuna ngozi? Isu vanhu vanobhururuka vakapusa here?